Ukupapashwa kwabangenayo, abaxumi bezindlu, abaqulunqi - abalungisi beephahla. Makhe sicinge ngokubambisana okunenzuzo kuwo onke amaqela - iNelju.cz
Ukukhangela abenzi be-realtors, abathengisi kunye nabalungisi beekhadi zekhadi ukusuka ePardubice
Kutheni le nqaku? Kungenxa yokuba mhlawumbi bekube yinye yeenkulungwane zeengcamango ezihlala kwindawo ethile kwi-drawer. Ingcamango engekho ngokupheleleyo kwaye ingaba yinye isahlulo se-micro-real estate jigsaw puzzle. Isicwangciso sam sisetyenziswe ngaphambili. Musa ukuqeshisa othandekayo, ungaqashisi ngokushelela. Ukunikezwa kwerenti eqhelekileyo kwixabiso eliqhelekileyo kubantu abaqhelekileyo. Kodwa oko akuthethi ukuba ndiyakwenza ngokuqhelekileyo, njengawo wonke umntu.
Ndaqala ngolu hlobo xa ndenqaba ukuhlawula iinyanga zonke kwaye ndaqhubeka nokulahla ukuchithwa kwexesha elingenammiselo, kulandelwa ukuphuculwa okuncinci kunye nejeti zecarage ndazibhala kwinqaku elithi "Igalaji eyongeziweyo-mali iya kwenza imali eninzi ... "
Ingaba kukho nawuphi na isithsaba esingaphezulu sokwenza umthengi - umqeshi akakho konke? Ndicinga njalo.
Oko ndiyibonayo xa ndihamba ngegaraji
Ndiyayibona imfuno kodwa ingozi. Abafundi abaqhelekileyo mhlawumbi bayazi ukuba enye yeendlela endifuna igalaji entsha kukuba ndikhangele abantu abangenalo ixesha okanye umnqweno wokunyamekela ezi zakhiwo. Iigaraji ziwafaka kwiindawo zokuhlala, ziyimali kwaye intengiso kukukhetha okuhle kubo bobabini kunye nam.
Njengoko ndihamba emigqeni, ndaqaphela amancinci amancinci amhlophe agcinwe kwigaraji ngalinye. Andizi ukuba unzima kangakanani, kodwa apha ePardubice akukho ndawo engumnyama weKosher. Xa ufumana ukufuphi, uzakufumana ukuba ukulungiswa kwamaphaphabhodi ebhodi. Ngenxa yokuba umntu iqhuba umngcipheko wendiza yombhobho, ngoko ke le mzamo ufanelekile. Into endiyibala ngayo iziqwenga zemihlobiso, ngoko ke umntu angakwazi ukungena kumthwalo 500Kč, ixesha elithile 500K xa ndibambelele emhlabathini isixa semali yewaka. Kwiinyanga ezintathu, ama-stickers are gone, kodwa andifuni ukuvuselela kanye emva kweenyanga ezintandathu. Oko kukuthi, Iindleko ze2000Kč ngonyaka. Ndicinga ukuba kunokwenzeka ukwenza isikhangiso sezomthetho sale mali, eya kubuyela omnye msebenzi.
Ukupapashwa ukulungiswa kwephahla
Yaye umntu angawulungisa njani umthetho? Kuthekani ukuba ndinikela ngamagaraji amabini kwindawo enhle, umz isikhangiso esikhulu, esikhulu kwisango? Ndiyakwenza umvuzo ube mnandi, kuba andiyi kuhlawula imali. Ndineendawo enye, ngoko ndingayisebenzisa. Kwakhona, njengaxa onke, kuya kuba nexesha elaneleyo lokuqeshisa ukwenzela ukuba akukho nxaxheba kufuneka icinge ngemali nyanga zonke kwaye andiyi kubona ingxaki yokuqala ukubiza.
Kwaye kuqale ntoni na? Xa ndibeka ikhadibhodi entsha ekwindla kwaye ndijonge ngeenxa zonke, ukugcinwa kokukhanya bekufuna ihafu yegaraji. Kubonakala kum ukuba ininzi yabantu, de kube yaya egalaji kwigaraji, ungayicombululi. Kwaye ukuba oko kwenzeka, ngokukhawuleza kufuneka baxazulule ingxaki ngokukhawuleza. Ii-Rooftops zikhethiweyo.
Ndabona phi umngcipheko?
Awuzange unqabile ngethuba eli nqaku? U saziyo? Nangona ndikhubekile kakhulu ngenxa yemonakalo ebangelwa ulonwabo, ukuba sithetha ngomonakalo obangelwa yi-sprays, ngoko kwimeko enjalo akuyi kuba mnandi. Ewe, ngokwenene andithandabuzi, ndiyathanda kakhulu xa amasango ekhangeleka ngendlela engalunganga, xa evezwe ngepende, ekhona imibala emininzi edlula kuwo, kwaye umntu uya kuqhuma enye ye daemon. Akuyithandi nje ukuba isela njengokuba ibona intshontsho yokutshiza, isango elipheleleyo, iisiti ezintathu kunye nophahla olulungisiweyo.
Nj, kodwa xa ufaka isikhangiso emnyango kwaye umntu uyifaka ngeveki, ayikwazi ukuthelekiswa nokunamathela kwesitika. Ngoko ukukhangisa kufanele kubonakale njani? Ungayenza njani ukuze ilungiswe kwakhona xa kwenzeka umonakalo? Kodwa yile ingxaki yam, kungekhona ngubani oza kuhlawula loo ndawo. Ngokuqinisekileyo, siya kubaphatha bonke ukuze kufike umonakalo kum.
Unomdla kwiintengiso ezimele zihlawulwe? Yibize!
Nangona indawo yokukhangisa ePardubice ifumaneka, iyafaneleka. Ngaloo nto, ukwenza isipho esifanelekileyo kwindawo efanelekileyo ngokufanelekileyo ngexesha elifanelekileyo. Apho enye wafaka ibhanile enkulu ukuba bayihlaziye uphahla ikhadibhodi phezu kukho apho abantu ngumsindo xa amanzi wonakalise konke egaraji kwaye azinazo ezi zinto, nangona okwethutyana, apho uhlambulukile.
Ngoko ke ndikhangela ingcweti enokuthanda ukuseka le fom yokubambisana kwexesha elide.
igaraji njengotyalo-mali, urhwebo, ukuthenga igaraji, yezindlu, ukukhangisa iPardubice, isikhalazo, myili
Iingxelo ze-2 "Ukupapashwa kwabangenayo, abaxumi bezindlu, abaqulunqi - abalungisi beephahla. Makhe sihlakulele indlela yokusebenzisana kuyo yonke imibutho"
Pavel K. wabhala wathi:
Siyabulela inqaku elilandelayo. Akunjalo nje ngokuba umxholo wegalaji unomdla kum, kodwa ngenxa yesinye isizathu. Ndiza kuvula uluhlu, iDnes, Current, ct24, njl. Kwaye ndiya kufumana amanqaku amaninzi, ulwazi kunye neendaba. Iphutha elinye kuphela. Into endiyifunde yokuqala iyinto entsha kum. Yonke enye iseva okanye iphrinta iphinda iphinde ifane. Ukungabikho kwamagqabaza, kodwa ndicinga ukuba i-1 / 3 inomdla. Ngokufanayo, kukho ezinye iindawo - i-finance, iteknoloji, IT. Omnye umbhali nabanye babhala ngaphezulu ikhonkco kumaphepha okuqala.
Kutheni ndixabisa iNelzu.cz?
Nguye umbhali. Akukho ziguqulelo zamasayithi angaphandle okanye asekhaya. Ziyizimvo zomntu othile, kungakhathaliseki ukuba ndivuma okanye akunjalo. Kwaye akusiyo isitayela - ndandisebenza namhlanje, ndandidla, ndabukela i-TV ndaza ndalala. Ndavuka ekuseni kwaye ndadla.
Ndiya kugcina iifom zam abafundi abaninzi kwaye aziyi kutshintsha kumboniso wesikhangiso kunye namanqaku amaninzi nakweyiphi intengo nakwezinye iisayithi njengelinye ilitshintshile enye yamasayithi amathandayo.
Ndiyabulela loo nto.
Siyabonga ngempendulo yakho. Ewe, ndiyazi ngokucacileyo ukuba i-blogger yamava ibalulekile kule bhulogi. Akukona ukuba ngaba uhlala uyinyaniso ukuba yonke into iya kwenzeka, kodwa ngokuphathelele ukubeka amanye amacatshulwa entloko yomfundi, umzekelo, ingcamango engazange ndibuyiselwe kwaye iqhube phambili. Okanye ngokuchaseneyo, thintela into endiyilumkisileyo ngam mazinyo nam kwaye yintoni eyandilimaza. Uyazi ukuba ndacinga ukuba ababhali abaninzi babeza kunceda (ikakhulu ngenxa yokuba andiqinisekanga ukuba ndiza kuba negalelo kangakanani), kodwa ngenxa yezizathu ozibhalayo, ndiyichitha. Le bhuloza ayisayi kuba ngumenzi we-generator, kodwa yindlela yokwenza iingcamango malunga nendlela yokuhamba. Ndifunda iiblogs ngokwam, kwaye enye yazo iyakhuthaza kum, umzekelo, xa ndiyithatha ingcamango engundoqo kwaye ndiyisebenzise kwenye indawo okanye ndithucula isisombululo sombhali,
Izikhangiso ziya kuba kuphela kuloo mali ukuhlawula ibhanti yam yebhanti. Ngoko ke ngokuqinisekileyo ndiya kulufunda ubomi bomfundi kwaye ayiyi kuwukhawulela, umzekelo, ekufumanekeni kwamanye amanqaku.